14 ft HVLS Saqafka Fan 133,900CFM PMSM Taageerayaasha Qaboojinta ee Ganacsi
Aagga caynsanaanta weyn ee hawo afuufidda hawada waxay noqon kartaa 133900CFM.
2.Ideal isticmaalka meel bannaan oo weyn dhererkeedu wuxuu ka badan yahay 3.5 mitir.
3.Masuulida saqafka sare ee warshadaha waawayn iyo tamarta ， Hoos udhaca isticmaalka tamarta kululaynta ilaa 30% meesha ugu hooseysa
Ma rabtaa inaad dadka degan ka dhigto mid raaxo leh oo lacagtaada keydsada? Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa kuwa ugu xalka fiican-ganacsiga qaboojiyeyaasha ah ee goobaha ganacsiga, sida xafiiska, maqaayadaha, tiyaatarada iyo wixii la mid ah.
Taageeraheenna saqafka sare ee ganacsiga ayaa si tartiib ah oo aamusnaan ah ugu baahin kara hawooyin badan si ay macaamiisha uga dhigaan kuwo raaxo leh oo faraxsan, sidoo kalena shaqaalaha ka dhigaya kuwo caafimaad qaba oo wax soo saar badan leh.
Iyada oo leh saqafyo dhaadheer iyo muuqaallo laba jibbaaran oo fara badan, tas-hiilaadka warshadaha waaweyn sida jimicsiga ama xarunta isboortiga ayaa wajahaya qulqulka hawada iyo caqabadaha hawo-qaadashada. Qaboojinta iyo kululaynta meelaha balaaran ee balaaran waa caqabad maxaa yeelay qaboojinta ama kululeynta hawada waxay ku kici kartaa qiimo aad u badan qalabka HVAC iyo kharashka howlgalka.
Mugga hawada 133931CFM
Xawaaraha ugu badan 80RPM
Nooca mootada Mashiinka PMSM
Nooca taageeraha Warshadaha, Ganacsiga, Beeraha
Sanado damaanad xaddidan 1 (Nolosha hawada hawada)
Qalabka Blade Daawaha Aluminium
Nooca buurta Saqafka
Tirada Xawaaraha Isbeddel
Midabka Guryaha Fan Madow
Midabka Fan Blade Cawl
Tirada Caleemaha 6
Codsiyada Deegaanka Warshado, ganacsi, jimicsi
Sababaha loo doorto taageerayaasha qaboojiyaha saqafka ganacsiga OPT ee ganacsiga
1. Abuuritaanka jawiga shaqada raaxada: Iyada oo leh mugga hawada 133900CFM, mugga sare, taageerayaasha xawaaraha hooseeya waa HVLS wax ku ool ah oo taageerayaal ganacsi oo waaweyn oo loogu talagalay goobaha ganacsiga. Hawada wareegaya ayaa ah mid jilicsan waxayna ka dhigi kartaa macaamiisha inay dareemaan raaxo ayna sare u qaadaan caafimaadka shaqaalahaaga.
2. Yaree isticmaalka kharashka: Awoodda taageereyaasha ee 0.4kw, taageerayaasha saqafyada waaweyn ee ganacsiga waa xalka kharash-ku-oolka ah ee ka caawin kara rugtaada ganacsiga inay biilasha qaboojinta ku sii hayso gacanta.
Meesha rasmiga ah sida suuqa laga adeegto ayaa ka faa'iideysan kara taageere ganacsi
1. Rakibida mashiinka saqafka weyn ee ganacsiga, shaqaalahaagu waxay dareemayaan raaxo badan ka dibna waxay noqonayaan kuwa wax soo saar badan.
Macaamiishaadu waxay ku laaban doonaan dukaankaaga inta jeer ee soo noqnoqota haddii ay dareemaan raaxo. Xawaaraha hoose iyo sawaxanka aamusanna way kufiican yihiin inay sii joogaan.
3.Shopping mall way adag tahay in la qaboojiyo, maadaama ay leedahay meel ballaadhan oo ballaadhan. Xilliga xagaaga, kuleylka aan loo adkaysan karin wuxuu keenaa biilasha qaboojinta si dhakhso leh ayuu u kordhayaa. In kasta oo awoodda dhaqdhaqaaqa hawada ee weyn ee taageerayaasheena saqafyada waaweyn ay xallin karaan dhibaatooyinkan si wax ku ool ah ayna yareeyn karaan qiimaha korantada.
Hore: 12 ft HVLS Saqafka Fan PMSM Taageerayaasha Ganacsi ee Dadweynaha 109,200CFM
10 Ft HVLS Saqafka Fan - PMSM Motor-For I ...
12 ft HVLS Saqafka Fan PMSM Taageerayaasha Ganacsi ee ...
OPT 10FT HVLS PMSM Motor Warshadaha Qaboojinta Ven ...